RAVI TEJA ရုပ်ရှင်၏ (၂၅) ပုဒ်ပါ။ - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Ravi Teja (၂၅) ရုပ်ရှင်ဖြင့်ကူးယူထားသောဟီဒီယိုရုပ်ရှင်ကားစာရင်း။
Ravi Teja သည်ကျော်ကြားသောတောင်အိန္ဒိယစူပါစတားဖြစ်ပြီးတောင်အိန္ဒိယရုပ်ရှင်လုပ်ငန်း၏လခအမြင့်မားဆုံးသရုပ်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သူ၌နောက်လိုက်ပရိသတ်ကြီးရှိပြီးသူ၏ကောင်းမွန်သောရုပ်ပြအချိန်ဇယားကြောင့်ကျော်ကြားသည်။ Ravi သည်သူ၏အနုပညာဖန်တီးမှုအစကိုစတင်ခဲ့ပြီးယခုအခါသူသည်အောင်မြင်သောတောင်အာဖရိကသရုပ်ဆောင်မင်းသားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤတွင် Ravi Teja ရုပ်ရှင်ဟုအမည်ပေးထားသည့်ဟိန္ဒူဘာသာ၏စာရင်းဖြစ်သည်။
၁ ။ Dongodu Hindi ကိုဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ် bed ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ Chalu နံပါတ် ၁ ′
Dongodu (2003) သည် Srinivasa Rao Bhimaneni မှဒါရိုက်တာ Telugu တီဗွီဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်မှာပါ ၀ င်ပါတယ် Ravi Teja နှင့် Kalyani ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ in ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့ box Office ရဲ့အောင်မြင်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့ခေါ်ပါတယ် 'Chalu နံပါတ် ၁' ။
ကြံစည်မှု - Madhava, သူခိုးသည်မရိုးသားသောနည်းလမ်းများဖြင့်သူ၏ဖခင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဝယ်ယူသောအိမ်ရှင်၏သမီးကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ မိန်းကလေးတစ် ဦး တည်းကိုသာချစ်သောရဲသည်ရာဇ ၀ တ်မှုအတွက် Madhava ကိုဘောင်ခတ်ထားသည်။
၂။ 'Itlu Sravani Subramanyam' ကိုဟိန္ဒူဘာသာတွင် 'Yes or No' ဟုခေါ်တွင်သည်။
Itlu Sravani Subramanyam (၂၀၀၁) သည် Puri Jagannadh မှရေးသားသောဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည် Ravi Teja၊ Tanu Roy နှင့် Samrin တို့ကိုအဓိကနေရာတွင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဒါဟာ box-office မှာစူပါ hit ဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုခေါ်ဝေါ် 'ဟုတ်လားသို့မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလား' ။
ကြံစည်မှု - သူစိမ်းနှစ်ယောက်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံသည့်နေရာ၌တွေ့ဆုံပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သေစေရန်ကူညီကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်၍ သူတို့၏သီးခြားနည်းလမ်းများဖြင့်သွားကြသည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးလက်ထပ်ထိမ်းမြားရန်စီစဉ်ထားသော်လည်းနောက်ဆုံးကာလတွင်သူတို့သက်ဆိုင်ရာအိမ်များမှထွက်ပြေးကြသည်။
၃ ' Devudu Chesina Manushulu ' အဖြစ်ဟိန်ဒီအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'ဒါဒဂီ'
Devudu Chesina Manushulu (2012) သည် Puri Jagannadh မှရိုက်ကူးပြီးရိုက်ကူးခဲ့သော Tollywood စိတ်ကူးယဉ်လှုပ်ရှားမှု - ဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင် Ileana D'Cruz ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ဤရုပ်ရှင်သည်အလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်ပေးထားသည် 'ဒါဒဂီ' ။
ကြံစည်မှု - Goddess Lakshmi နှင့် Lord Vishnu အကြားစကားများရန်ဖြစ်သဖြင့်သေတတ်သောမိဘမဲ့နှစ် ဦး ၏ဘဝများသည်မငြိမ်မသက်မှုများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ နှစ်ခုလူတစ် Don ရဲ့ဘဝ၏ဒရာမာထဲမှာဖမ်းမိသောအခါအားလုံးသည်စတင်ခဲ့သည်။
၄ ' Veera 'ကို The Great Veera' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
နေပြည်တော် (2011) သည် Ravi Teja သရုပ်ဖော်ထားသော A. Ramesh Varma ရိုက်ကူးသောတီလူးဘာသာစကားလှုပ်ရှားမှုဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ Kajal Aggarwal နှင့် Taapsee Pannu ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကို flop နှင့်ဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် 'The Great Veera' ။
ကြံစည်မှု - Rahul Dev သည်သူ့ကိုဖမ်းဆီးသည့်အတွက် ACP Shaam ကိုလက်စားချေရန်စီစဉ်နေသည်။ Deva Shaam ရဲ့မိသားစုမှလုံခြုံရေးပေးခန့်အပ်ထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် Shaam သည် Deva အားအစိုးရအရာရှိများမှခန့်အပ်ခြင်းမခံရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
၅။ 'စွမ်းအား' အားဟိန္ဒူဘာသာအား '' Power Unlimited '' ဟုခေါ်တွင်သည်။
ပါဝါ (2014) ကေအက်စ် Ravindra ဒါရိုက်တာတစ် Telugu အဘိဓါန်အရေးယူဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတွင် Ravi Teja သည်အဓိကအခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်သည် Hansika motwani နှင့် ဘုရင်မ Cassandra အမျိုးသမီး ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ playing ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာနာမည်ကြီးပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အမည်ပေးထားသည် 'Power Unlimited' ။
ကြံစည်မှု - ရဲအရာရှိ Krishna သည်ရဲအရာရှိတစ် ဦး ၏သမီး Sailaja ကိုချစ်မြတ်နိုးသည်။ သို့သော်သူ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာသူမ၏ဖခင်ကိုထိုးနှက်ရန်သူမကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။
၆ ။ Anjaneyulu ' 'Sher Dil' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်
Anjaneyulu (၂၀၀၉) သည် Paraviuram မှ Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသောတီလူးဂီတရုပ်ရှင်ဖြစ်သည် နာယက သရုပ်ဆောင်များကိုစဉ် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္အတွက် Prakash Raj နှင့် အဆုံးမှာ Sood အဓိကအခန်းကဏ္မှပါ။ ၎င်းသည် Flop ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Sher Dil' ။
ကြံစည်မှု - Anjaneyulu သတင်းရုပ်သံလိုင်းတွင်သတင်းထောက်ဖြစ်သည်။ သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Surya သည်မာဖီးယားဂိုဏ်းတစ်ခုနှင့်ဆက်နွယ်သောလူသတ်မှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုအပေါ်ထိမိလဲသွားသည်။ မကြာခင်မှာပဲ Anjaneyulu လည်းနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်လူဆိုးဂိုဏ်းများအကြားတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်
၇ ။ Balupu 'ကို Jani Dushmann' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Balupu (၂၀၁၃) သည် Gopichand Malineni မှတာလူးလှုပ်ရှားမှုဟာသဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Ravi Teja, Shruti Haasan နှင့် Anjali Prakash Raj၊ Adivi Sesh နှင့်အတူအဓိကအခန်းကဏ္မှပါ ၀ င်သည်။ Ashutosh Rana နှင့် Brahmanandam ထောက်ပံ့အခန်းကဏ္ in ။ ၎င်းသည်စူပါ hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်တပ်ခဲ့သည် 'Jani Dushmann' ။
ကြံစည်မှု - Ravi သည်ဘဏ်တစ်ခုမှစုဆောင်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးယုံမှားသံသယရှိသောလူကိုလှည့်စားတတ်သောယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြောင်းသူ၏သူငယ်ချင်းထံမှသိသည်။ မကြာခင်မှာပဲသူကစုံတွဲကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
၈ ။ Seetharama Raju ' အဖြစ်ဟိန်ဒီအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Ek Aur Haqeeqat'
Seetharama Raju (၁၉၉၉) သည် YVS Chowdary မှတီထွင်ထားသောတီဘီဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ သရုပ်ဆောင် Nagarjuna Akkineni , Nandamuri Harikrishna, Sakshi Shivanand, Sanghavi တို့သည်အဓိကနေရာမှ Ravi Teja ကိုပံ့ပိုးပေးနေသည်။ ၎င်းသည်ပျမ်းမျှရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'Ek Aur Haqeeqat' ။
ကြံစည်မှု - အချင်းချင်းချစ်ကြတဲ့ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်အကြောင်းပါ။ ဆတီယာယာနှင့်ဘာဗာဗာရာဂျူးတို့၏မိသားစုများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုသည်ဆစ်တေယာယနှင့်ရာမာရာဂျူးတို့၏လက်စားချေမှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။
၉ ။ Baladur ' ဟိန္ဒူဘာသာအား Dhamkee ဟုခေါ်တွင်သည်။
Baladur (၂၀၀၈) သည် Udayasankar မှတီထွင်ထားသောတီဘီလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Krishna ဟိန္ဒူရှိ Ravi Teja သည်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ မသီတာရှာတီ , Chandra Mohan, Pradeep Rawat, Sunil နှင့် Suman Setty တို့ကပံ့ပိုးပေးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကို flop နှင့်ဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် ‘ဓမ္မ ။
ကြံစည်မှု - Chanti သည်သူ၏ ဦး လေး Rama Krishna ကိုအလွန်လေးစားသည်။ ဒါပေမယ့်သူကနားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကြောင့်သူတို့အိမ်မှမောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူသည်သူ၏ ဦး လေးကိုသူ၏နှလုံးသားရရန်သူ၏ရန်သူ Umapati ကိုအနိုင်ယူရန်တိတ်တဆိတ်ကူညီပေးခဲ့သည်။
၁၀ ။ neninthe ' 'Ek Aur Vinashak' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်
Neninthe (2008) Puri Jagannadh ကရေးသားနှင့်ဒါရိုက်တာ Telugu masala ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Ravi Teja သည် Siya ကိုအမျိုးသမီး ဦး ဆောင်နေစဉ်အဓိကအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box Office မှာမအောင်မြင်ပေမယ့် Nandi Awards ဆုသုံးခုရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်ဟုအမည်ပေးထားခဲ့သည် 'Ek Aur Vinashak' ။
ကြံစည်မှု - ရုန်းကန်နေရတဲ့လက်ထောက်ဒါရိုက်တာ Ravi ကတော့တော်တော်လေး Sandhya နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ပြီးသူမရဲ့သမီးငယ်လေးရုပ်ရှင်ထဲကိုသူမထည့်လိုက်သည်။ Yadu ဆိုတဲ့ကြွယ်ဝတဲ့ goon ဟာသူ့အလုပ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူကအရှိန်မြှင့်ပြီးတိုက်ခိုက်ရမယ်။
တကျိပ်တပါး။ ' Mirapakay ' ဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ် ‘အဖြစ်သတ်မှတ်သည် Khallas ''
Mirapakay (၂၀၁၁) သည် Harish Shankar မှတီထွင်ထားသောတီဘီဘာသာစကားဖြင့်ပြုလုပ်သောဟာသဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် Ravi Teja, Richa gangopadhyay နှင့် Deeksha ရှေ ဦး ဆောင်၌တည်၏။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာ blockbuster ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့အခေါ်ခံရသည် 'Khallas' ။
ကြံစည်မှု - စစ်ဆေးရေးအရာရှိ Rishi သည်သူ၏မကောင်းသောအကြံအစည်များကိုရပ်တန့်ရန်မာဖီးယားခေါင်းဆောင် Kittu အားဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ မာဖီးယားခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးရန် Kittu ၏သမီး Vaishali ကိုဆွဲဆောင်ရန်သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
၁၂ ‘ အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ရှိဒူဘိုင်း Seenu '' '' Loafer '
ဒူဘိုင်း Seenu (2007) သည် Srinu Vaitla မှတီဟီတီဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီး Ravi Teja ကိုအဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ပျမ်းမျှကြီးနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 'Loafer' ။
ကြံစည်မှု - Madhumati ရဲ့အစ်ကို Jinna, တစ် ဦး မရဏာနိုင်ငံ Don အားဖြင့်သေဆုံးသည်။ သူမသည်မွန်ဘိုင်းကိုလာပြီး Srinivas ကိုချစ်တယ်။ သူတို့နှစ် ဦး လုံးက Jinna ကိုလက်စားချေရန်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။
၁၃ ။ Krishna ဟိန္ဒူ 'Krishna ဟိန္ဒူ: ကမ္ဘာမြေ၏အင်အားကြီး' 'အဖြစ်အမည်တပ်ထားသော
ခရိနာ (၂၀၀၈) သည် Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသော V. V. Vinayak၊ Trisha Krishnan ။ ၎င်းသည်စူပါ hit ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဟိဒီဘာသာသို့ကူးပြောင်းခဲ့သည် 'Krishna ဟိန္ဒူ - ကမ္ဘာမြေ၏စွမ်းအား' ။
ကြံစည်မှု - Krishna ဟိန္ဒူသည်ကြင်နာတတ်သောနှလုံးသားလေးဖြစ်ပြီးဆင်းရဲသောသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အားအကျိုးအမြတ်များသောအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုစွန့်လွှတ်သည်။ ကန ဦး ကြို့ထိုးပြီးနောက်သူတစ် ဦး Don ရဲ့အစ်မနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါစုံတွဲမကြာမီမျိုးဂိုဏ်းစစ်အကြားဖမ်းမိသည်။
၁၄ ‘ Bhadra ကိုဟိန္ဒူဘာသာအား 'Badala' ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်
Bhadra (၂၀၀၅) ဒါရိုက်တာ Boyapati Srinu မှ Ravi Teja၊ Arjan Bajwa၊ Meera စံပယ် ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ ၎င်းသည်ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူအဖြစ်အမည်တပ်ခဲ့သည် 'လူကြီး' ။
ကြံစည်မှု - Bhadra သည်သူ၏သူငယ်ချင်း Raja ၏ညီမ Anu ကိုချစ်သည်။ ပြိုင်ဘက်ဂိုဏ်းကတိုက်ခိုက်မှုနှင့် Raja ၏မိသားစုကိုသတ်သောအခါ Bhadra Anu ကိုကယ်တင်ရန်နှင့်လူသတ်သမားများမှသူမ၏ကာကွယ်ပေးရန်သူ၏အိမ်တွင်သူမ၏ပုန်းအောင်း။
တစ်ဆယ့်ငါး '' Даруvu ' 'Jeene Nahi Doonga' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာအားဖြင့်
Даруvu (၂၀၁၂) သည် Riva Teja နှင့် Taapsee Pannu တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္Sတွင် Siva မှရိုက်ကူးပြီးရိုက်ကူးသော Telufantasy-action-comedy ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Flop ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်ပြီးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်အမည်ပေးထားသည် 'Jeene Nahi Doonga' ။
ကြံစည်မှု - နှစ် ဦး စလုံးသည်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုချစ်ကြသောကြောင့် Babu သည် goon Raja ကျည်ဆန်ဖြင့်သတ်ပစ်သည်။ ကျည်ဆန်သည်သေသောနတ်ဘုရားနှင့်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးသူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကသတ်ဖြတ်ခဲ့သည့် ၀ န်ကြီးတစ် ဦး ဖြစ်သည့် Ravindra ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။
၁၆ ။ Bhageeratha 'ဟိန္ဒူဘာသာအား' 'The Sikander of Return'
Bhageeratha (၂၀၀၅) သည် Rasool Ellore ရိုက်ကူးသောတီဘီဟာသဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင် Shriya Saran ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္၌တည်၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ပျမ်းမျှကြီးနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 'Sikander ၏ပြန်လာခြင်း' ။
ကြံစည်မှု - အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်သူ၏ဖခင်၏အမိန့်ကိုလိုက်နာသူ Chandu အကြောင်းဖြစ်ပြီး၊ ဘာကြောင့် Venkata Ratnam, realtor သည်ရွာသူရွာသားများကိုကူညီမည့်တံတားတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အချိန်များစွာယူနေသည်ကိုရှာဖွေရန်သွားသည်။
၁၇ ‘ Shock ကို 'Kick Returns' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်
ထိတ်လန့် (၂၀၀၆) သည် Harish Shankar မှတီထွင်ထားသော Telugu ရုပ်ရှင်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင် ကျောက်စိမ်း ။ အဆိုပါ mov တစ်ခုအီးပြင် flop ကြီးနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသော 'Kick Returns' ။
ကြံစည်မှု - သူသည်အကျင့်ပျက်အရာရှိများက 'မော်ဝါဒီ' ဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခံရသောအခါ Sekhar နှင့် Madhurima ၏ပျော်ရွှင်စွာလက်ထပ်ထားသောဘဝသည်ပျက်စီးသွားသည်။ Madhurima နှင့် Geeta တို့သည်သတင်းထောက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသူ၏အပြစ်ကင်းမှုကိုသက်သေပြရန်ကြိုးစားသော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။
၁၈။ 'Sabse Bada Don' ဟုဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သော 'Don Seenu'
ဒွန် Seenu (2010) သည်သရုပ်ဆောင် Srihari နှင့်အတူ Ravi Teja နှင့် Shriya Saran တို့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသောပထမဆုံး Gopichand Malineni မှတာလူးသရုပ်ဆောင်ဟာသဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ Anjana Sukhani ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိကြ၏။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာရိုက်ကူးနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည် 'Sabse Bada Don' ။
ipl အဖွဲ့များ 2019 ပိုင်ရှင်များ
ကြံစည်မှု - Seenu မှာရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်။ သူကမြို့ရဲ့လူဆိုးဂိုဏ်းတစ် ဦး နှင့်အတူလက်ပူးပေါင်းမည်နှင့်သူ၏ယုံကြည်မှုကိုရရှိ။ သို့သော်သူသည်ဂျာမနီသို့သွားသောအခါသူသည်ပြင်ဆင်မှုတွင်ဖမ်းမိသည်။
19. ‘ Vikramarkudu ' 'Pratighat' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
Vikramarkudu (၂၀၀၆) သည်အက်စ်အက်စ်။ ရာဂျမီအူလီမှတီဗွီဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး Ravi Teja၊ Anushka Shetty နှင့် Vineet Kumar တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ကိုအလွန် hit နှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်တပ်ထားသောခဲ့သည် 'Pratighat' ။
ကြံစည်မှု - Rathore နှင့်တူသော Sathibabu သည်သူသေဆုံးပြီးနောက်သူ၏သမီးကိုမွေးစားရုံသာမကရဲအရာရှိအဖြစ်ပင်နေရာယူထားသည်။ သူ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ Babuji ဆိုးသွမ်းမှုကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်သည်။
နှစ်ဆယ်။ ' Khatarnak 'ဟိန္ဒူဘာသာတွင်' Main Hoon Khatarnak 'ဟုအမည်တပ်ခဲ့သည်
Khatarnak (2006) သည် Ravi Teja နှင့် Ileana D'Cruz တို့၏အဓိကအခန်းကဏ္directorတွင်ဒါရိုက်တာ Amma Rajasekhar မှတီထွင်ထားသော Telugu လှုပ်ရှားမှုရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ box-office မှာပြောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဟိန္ဒူဘာသာလို့လည်းခေါ်ကြတယ် 'Main Hoon Khatarnak' ။
ကြံစည်မှု - လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်သတင်းပေးတစ် ဦး အနေဖြင့်လှူဒါန်းသူသည် Dasu အားရဲနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ငှားရမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် Dasu သည်လူကိုသတ်ရန်စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအရာမရောက်ပါ
နှစ်ဆယ့်တစ်။ ' Naa Autograph ကို 'Thokar' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်ခေါ်ဝေါ်
naa ကိုယ်တိုင်ရေးလက်မှတ် (၂၀၀၄) သည်အက်ပို။ ဂိုလ်ဖာ Reddy မှရိုက်ကူးသော Tollywood ဒရာမာရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်သည် Ravi Teja ကိုအဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည် Bhumika Chawla Gopika၊ Mallika နှင့် Prakash Raj တို့သည်အခြားအရေးပါသောအခန်းကဏ္ playing မှပါ ၀ င်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည် flop ဖြစ်ပြီး Hindi ဟုအမည်ပေးထားသည် သုကရ ။
ကြံစည်မှု - Seenu ကသူ၏မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ကြားချက်များကိုဖြန့်ဝေသည်နှင့်အမျှအမှတ်တရများဟောင်းပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်။ သူ၏အတိတ်ကာလမှချစ်ခြင်းမေတ္တာအမျိုးမျိုးကိုသူပြန်အမှတ်ရနေသည်။ ကလေးဘဝ မှစ၍ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုတန်ဖိုးထားရန်သင်ကြားပေးသောမိန်းကလေးအားချစ်ခြင်းမေတ္တာမှသည်
22. 'Nippu' ကိုဟိန္ဒူဘာသာတွင် 'Main Insaaf Karoonga' ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
စည်း (၂၀၁၂) သည် Ravi Teja နှင့်သရုပ်ဆောင်ထားသော Gunasekhar မှရိုက်ကူးထားသောတီလူးဘာသာစကားပြောဇာတ်ကားဖြစ်သည် Deeksha ရှေ ဦး ဆောင်၌တည်၏။ ၎င်းသည် Flop ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးဟိန္ဒူဘာသာအဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် 'Main Insaaf Karoonga' ။
ကြံစည်မှု - သူ၏သူငယ်ချင်း Sriram သည်သူ၏ရည်းစား Vaishnavi ကိုသတ်မှုဖြင့်စွပ်စွဲခံရသောအခါ Surya အလွန်အံ့အားသင့်သွားသည်။ သူ့ကိုကယ်ဖို့အတွက် Surya ဟာသူ့ဖခင်ကိုတရားသေလွှတ်ဖို့လက်မှတ်ထိုးရန်လိုအပ်သည်။ ဒါပေမယ့်မိန်းကလေးရဲ့ဖခင် Surya ရဲ့အဟောင်းကိုရန်သူဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ၃ ' Shambo Shiva Shambo ကိုဟိန္ဒူဘာသာတွင် Mera Krodh ဟုခေါ်တွင်သည်။
Shambo Shiva Shambo (၂၀၁၀) သည် Samuthirakani မှတီထွင်ထားသောတီဘီဘာသာစကားလှုပ်ရှားမှုပြဇာတ်ဖြစ်သည်။ Ravi Teja ကိုသရုပ်ဆောင်ထားတယ်။ Allari Naresh , Siva Balaji, Priyamani နှင့် Abhinaya ကိုအဓိကအခန်းကဏ္ in မှပါ ၀ င်သည်။ ဤရုပ်ရှင်သည် Box-office hit အဖြစ်ကြေငြာခြင်းခံရသည် 'Mera Krodh' ။
ကြံစည်မှု - ချစ်သူနှစ် ဦး အားသူတို့၏အစွမ်းထက်သောမိဘများ၏ဆန္ဒများကိုဆန့်ကျင်ရန်မိတ်ဆွေသုံး ဦး သည်များစွာကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ သို့သော်သူငယ်ချင်းများကပေးသောယဇ်သည်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်သည်။
၂၄ ‘ Sarocharu ' 'Jabardast Aashiq' အဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာဖြင့်
Sarocharu (၂၀၁၂) သည် Ravi Teja၊ Kajal Aggarwal နှင့် Richa Gangopadhyay သရုပ်ဆောင်ထားသော Parasuram မှတီလန်းတီထွင်ဖန်တီးထားသောဟာသဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင် box-office မှာကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်အဖြစ်ဟိန္ဒူသို့ခေါ်ဝေါ်ကြသည်မဟုတ် 'Jabardast Aashiq' ။
ကြံစည်မှု - ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သော Sandhya သည်အီတလီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သည်။ သူမသည် Karthik ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးချစ်ခင်မှုရရန်အိန္ဒိယသို့သူနှင့်အတူသွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သူမ Karthik ရဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူသောအခါမူကားသူမအံ့သြသွားတယ်။
25. အဖြစ် '' Kick2'' အဖြစ်ဟိန္ဒူအတွက်အမည်ပေးထားသည် 'Jigarwala no 1'
Kick2(2015), Surender Reddy ကညွှန်ကြားထားတဲ့ Telugu အရေးယူဟာသရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Ravi Teja ပါရှိပါတယ် Rakul Preet Singh က ။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ Box-office မှာကောင်းမွန်စွာပြသခဲ့ပြီး၊ 'Jigarwala no 1' ။
ကြံစည်မှု - NRI ဆရာဝန်ရော်ဘင်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ Durga မှသိမ်းပိုက်ထားသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာဆေးရုံတစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ရောက်ရှိလာသည်။ ဤအောင်မြင်သောလုပ်ရပ်ကသူ့ကိုဝေးလံသောရွာတစ်ရွာသို့ပို့ဆောင်ပေးပြီးသူသည်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည်။
ဟိန္ဒီအမည်ရှိ ntr ရုပ်ရှင်
happu ki ultan paltan ဇာတ်ကောင်
shahrukh Khan တတိယကလေးမိခင်
yo yo ပျားရည် Singh ကမွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်
ခွကေို priyanka chopra အမြင့်
govinda ki ဇနီး ka ကိုဓာတ်ပုံ